St. Kitts & Nevis dia mamarana ny fameperana ny dia an-habakabaka avy any India sy Afrika atsimo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Saint Kitts sy Nevis Breaking News » St. Kitts & Nevis dia mamarana ny fameperana ny dia an-habakabaka avy any India sy Afrika atsimo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Saint Kitts sy Nevis Breaking News • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
St. Kitts & Nevis dia mamarana ny fameperana ny dia an-habakabaka avy any India sy Afrika atsimo.
Araka ny nambara tamin'ny 29 Mey 2021 dia ireo mpandeha vaksiny feno ihany no mahazo miditra ao amin'ny Federasiona.
St. Kitts & Nevis dia mandray tsara ireo mpitsangatsangana iraisam-pirenena vita vaksiny avy any India sy Afrika Atsimo.
Ny fanesorana ireo fameperana fivezivezena amin'izao fotoana izao ho an'i India sy i Afrika atsimo dia mifanaraka amin'ny famongorana ireo famerana ny mpandeha avy any UK amin'ny 1 septambra 2021.
Mijanona ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena avy any Brezila ny fetra fitsangantsanganana St. Kitts sy Nevis.
St. Kitts & Nevis dia mandray tsara ireo mpandeha an-habakabaka vita vaksiny iraisam-pirenena avy any India sy Afrika atsimo amin'ny 18 Oktobra 2021, fanesorana ny fameperana ireo mpandeha amin'ireo toerana roa ireo. Ny fanesorana ireo fameperana fivezivezena amin'izao fotoana izao ho an'i India sy i Afrika atsimo dia mifanaraka amin'ny famongorana ireo famerana ny mpitsangatsangana avy any UK amin'ny 1 septambra 2021, ary mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-panafody ao amin'ny Federasiona. Ny fameperana ny dia dia mijanona ho an'ny mpandeha iraisampirenena avy any Brezila.
Anisan'ireo olon-dehibe ao St. Kitts & Nevis, 77.4% no nahazo fatra iray tamin'ny vaksinin'ny AstraZeneca / Oxford, miaraka amin'ny 70.3% ny olon-dehibe vita vaksiny tanteraka; eo amin'ny ankizy sy ny tanora eo anelanelan'ny 12 - 17, 10.9% ny efa nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksinin'ny Pfizer / BioNTech tamin'ny 6.8% nahazo fatra roa. (Antontan'isa hatramin'ny 19 Oktobra 2021).
Ny 7 Oktobra 2021 lasa teo, dia nahena ho 24 ora ny "Fialan-tsasatra amin'ny toerany", ary nosedraina teny amin'ny hotely sy hotely "Travel Approved" ny fitsapana fahatongavana RT PCR. Ny valim-panadinana dia hatao mandritra ny 24 ora "fialan-tsasatra amin'ny toerana." Ireo mpitsangatsangana miaraka amin'ny valin'ny fitsapana ratsy dia mety hiditra tanteraka ao amin'ny Federasiona aorian'ny fotoana naharitra 24 ora ary nankafy ireo traikefa tsy tambo isaina St. Kitts & Nevis tolotra ao anatin'izany, fisakafoanana any amin'ny trano fisakafoanana, miaina ny fihobiana amin'ny iray amin'ireo trano fisotroana amoron-dranomasina eo an-toerana amin'ny "The Strip", mitsidika ireo toerana manintona tsy manam-paharoa sy iray karazana, mandeha amin'ny rano mangarahara, mitsangatsangana ny volkano, miantsena ny tsenanay asa tanana eo an-toerana na mangatsiaka any amin'ny morontsirakay iray.
Misy ny fanavotana ho an'ny olom-pirenena sy ny mponina ao amin'ny federasion'i St. Kitts sy Nevis ary ny ankizy latsaky ny 18 taona miaraka amin'ireo ray aman-dreniny na mpiambina vita vaksiny feno.
Ny Protocols sy ny fitakiana fitsangatsanganana rehetra dia mijanona eo amin'ny toeran'ny Federasiona St. Kitts & Nevis, ao anatin'izany ny fandefasana ny valin'ny fitsapana ratsy avy amin'ny fitsapana RT PCR 72 ora mialoha ny nahatongavanao.
Ny mpandeha iray dia heverina ho voan'ny vaksiny tanteraka rehefa lasa ny tapa-bolana hatramin'ny nahazoany ny fatra faharoa tamin'ny andiany vaksinina fatra roa (Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca / Oxford, Sinopharm na Sinovac), na tapa-bolana taorian'ny nahazoany vaksinina fatra tokana ( Johnson & Johnson). Ekena ny fampifangaroana ireo vaksiny nankatoavina ho an'i St. Kitts sy Nevis.